converter များစုဝေးရာ(1) - Page6- မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
26-07-2009, 10:25 PM
ပြန်စာ - converter များစုဝေးရာ(1)
သက်ဆိုင်ရာပို့စ်ကို ညွှန်းချင်ရင် အောက်က quote ဆိုတဲ့ ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ လူမုန်းရေ...
ဒီအတိုင်းကြီး ကူးပြထားရင် ဘယ်ပို့စ်ကဟာမှန်း ဘယ်သိမှာတုန်း။
keygen ကို run ရင် name နေရာမှာ ဘာမှမထည့်ဘဲ generate သာလုပ်လိုက်။
key ထည့်တဲ့အခါ name တစ်ခုခုထည့်လိုက်ရင် ရပါတယ်။ ကိုယ့်နာမည်ထည့်လည်းရတယ်။
key ထည့်ပြီးရင် program က exit လုပ်သွားလိမ့်မယ်။
ပြီးမှ ပြန် run ကြည့်ပါ။
မြင့်မိုရ်, ဖြိုးယံလေး, bonge, phoetharlay
Hi Dear Hector,
I can't download under FLV to all topic.
It's file expire or do I need to pay money?
Please kindly explain me.
်down လို့ မရဘူးကွယ် ကူညီပါအုံး၊ or FLV to AV1 converter software 1 ခုလောက်ညွှန်းပါကွယ်၊ ရှာရတာ ခေါင်းကိုက်လာပြီ၊ kindly please!!!!!
Last edited by phyomyintthein; 07-08-2009 at 01:48 PM.. Reason: အကြောင်းအရာ တူနေသဖြင့်
Flv to Video Converter လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ် သုံးရတာကတော့ အရမ်းအဆင်
ပြေပါတယ်ဗျာ Install လုပ်ပြီးရင်တော့ Activate လုပ်ပေးရမယ်နော် Keygen ကော Serial Key
တွေကော တစ်ခါတည်း ပါပြီးသားပါ အဆင်ပြေပါစေဗျာ....။ အဆင်မပြေရင်လည်း ပြန်ပြောပေးပါ။
အောက်ကလင့်ခ်လေးကနေ ယူလိုက်ပါ တစ်ခြားဖိုရမ်မှမရှိသေးတဲ့ အကို ၊ အစ်မ တွေလည်း အားပေး
Last edited by စစ်တွေသားချေ; 24-12-2009 at 06:27 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ စစ်တွေသားချေ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ချစ်သားငယ်လေး, မောင်ပေါ်ဦး, ဖြိုးယံလေး, mercury, phyomyintthein
Portable Xilisoft DVD Creator 3.0.45.0703
Last edited by tu tu; 11-08-2009 at 10:42 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ tu tu အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ပဲပြုတ်, ရည်ညွှန်း, phyomyintthein
ပို့စ် 31 ခုအတွက် 93 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
tu tu ရေ..
အပေါ်ဆုံးက ifile လင့်က ဒေါင်းမရဘူးဖြစ်နေတယ်..တစ်ချက်စစ်ပေးပါဦး...
နောက်ပီး အောက်က ပေါ့တေးဘဲလ်မှာပါတဲ့ ဒေတာ ဖိုင်က ပတ်ခ်ျဖိုင်လိုမျိုး
ဘ၀ဆိုတာ အပြေးအလွှားထွက်ခွာနေတဲ့ ကျည်ဆန်ရထားတစ်စင်းလိုဘဲ.....
Find More Posts by ရည်ညွှန်း
ifile လင့်ခ်က ကောင်းပါသေးတယ်။ connection ကြောင့် ဖြစ်မှာပါ။
sharebee လင့်ခ် ဖြည့်ပေးထားပါတယ်။
portable က ဘာမှ လုပ်စရာမလိုပါဘူး။
data folder က software ကို run လိုက်လို့ ပေါ်လာတာပါ။
ပို့စ် 102 ခုအတွက် 396 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
music converter ကောင်းကောင်းလိုချင်လိုသူများအတွတ် ကျွန်တော် ရှာတွေ့ မိတဲ့ converter software လေးတခုကို အားလုံး သုံးလို့ ရအောင် တင်ထားလိုက်ပါတယ် ဒီထက်ကောင်းတဲ့ software converter လေးများရှိရင်လည်း အတူတူ ဒီမှာဘဲတင်ပေးကြပါဦး။
.... ဒီနေမှာ ..ဒေါင်းယူလို့ ရပါတယ်.။
Last edited by nyinyi mt; 08-09-2009 at 09:56 PM.. Reason: for image
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ nyinyi mt အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
nyinyi mt ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
Find More Posts by nyinyi mt
နောက်တခု ရှာတွေ့ မိလို့ ပါ ဒါပေမယ့် ဒါကတော့ ဖိုရမ်တခုကနေတွေလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဖိုရမ်မှာလည်း တင်လိုက်တာပါ တင်ပြီးသားရှိလို့ထပ်သွားရင်တော့ ဆောရီးဗျာ ...
ဒါကတော့ လူသိအများတဲ့ ဆော့ဝဲလ် တခုရဲ့updates တခုပေါ့။။
ဒေါင်းချင်သူများအတွတ်တော့ .... ဒီနေရာ ..... လေးကနေယူလိုက်ကြပါ။
* Imports various video files
ဒါကတော့သူ့ ရဲ့homepage လေးပါ
Last edited by nyinyi mt; 08-09-2009 at 10:05 PM..
ပြန်စာ - music & video converter softwares of nn
[quote=nyinyimt;157341]music converter ကောင်းကောင်းလိုချင်လိုသူများအတွတ် ကျွန်တော် ရှာတွေ့ မိတဲ့ converter software လေးတခုကို အားလုံး သုံးလို့ ရအောင် တင်ထားလိုက်ပါတယ် ဒီထက်ကောင်းတဲ့ software converter လေးများရှိရင်လည်း အတူတူ ဒီမှာဘဲတင်ပေးကြပါဦး။
Email address နဲ့ Registration Code လေးကိုလေး ပြောပြပေးပါဦး ခင်ဗျာ....
ပြန်စာ - AVS video converter 6.3
Crack File ပါ တစ်ပါတည်းပါပြီးသားပါ ...
Download : >>
လွယ်လွယ်ကူကူ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး သယ်သွားချင်ရင်တော့ Portable လေး အောက်မှာဒေါင်းပါ ...
From 4Shared (Portable)
PASSWORD :-> WWW.Myanmarfamily.Org
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ ko myo အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စစ်တွေသားချေ, ပဲပြုတ်, amaung344, chitnyimalay, mercury, zo
ကိုမျိုးရယ် Converter လေးကိုတော့
ဒေါင်းသွားပြီဗျာ သုံးကြည့်လိုက်အုံးမယ် နောက်ထပ်အသစ်လေးတွေရရင်
လည်းထပ်ပြီးတော့ မျှဝေပေးပါအုံးဗျာ ကိုမျိုးတစ်ယောက် အစစအရာရာ
Originally Posted by nyinyimt
Daniusoft Digital Music Converter ဆိုတဲ့ name နဲ့ သူရဲ့ homepage ကိုရှာကြည့်နိုင်ပါတယ်.
keys ကတော့မလိုဘူး ကျွန်တော်သုံးတာ။ ဒါပေမယ့် မရဘူးဆိုရင်နောက်ကျွန်တော် ထပ်စစ်ကြည့်ပါဦးမယ်။
ဒီမှာ သူ့ ရဲ့ version နဲ့အလိ်ုက် keys တွေရနိုင်ပါတယ်
Last edited by nyinyi mt; 08-09-2009 at 10:04 PM..
နောက်တခုရှာတွေ့ ထားတာလေးပါ စမ်းတော့ သေချာမစမ်းရသေးဘူး ။
ဒါပေမယ့် သုံးရတာတော့ အလွယ်တကူနဲ့ အသုံးဝင်မယ့် portable software လေးပါ။
စိတ်ဝင်စားပါက ဒီနေရာ မှာယူနိုင်ကြပါတယ်။။
=Absolute MP3 Splitter & Converter isapowerful audio split,merge and convert software,which can split your large audio file into small pieces and merge audio files in one large file ,convert between audio formats, without losing sound quality.
www.iaudiosoft.com Homepage and code
မင်္ဂလာပါ ကိုညီညီ ....
ကိုညီညီတင်ပေးထားတဲ့ Converter လေးကိုတော့
ဒေါင်းပြီးသွားပြီဗျ ဖြီကြည့်တော့ Password တောင်းနေတယ်ဗျ
ဖြစ်နေလို့ Password အမှန်လေးသိချင်လို့ပါ အချိန်ရရင် ပြန်ကြည့်ပေး
စေချင်ပါတယ် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ နောက်ထပ် အသစ်လေးတွေတွေ့ရင်
လည်း ဖိုရမ် ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေအတွက် မျှဝေပေးစေချင်ပါတယ် ...။
Originally Posted by Smilelay
ဘယ် converter ကိုပြောတာလဲမသိဘူးဗျာ ...
quote လေးကိုပါတတွဲတည်း ဖော်ပြပေးပါလား။
ဒီရက်ထဲ ကျွန်တော်လည်း ကိုယ့်မှာ၇ှိတဲ့သီချင်းတွေ updates လုပ်ရင်းနဲ့ 
audio software တွေဘက်ကိုရောက်သွားတယ်
အခုလည်း သီချင်းတွေရှာရင်းနဲ့ ဘဲ ဆိုဒ်တခုက ဆော့ဝဲလ် လေးတခုတွေ့ မိလို့ 
နည်းနည်းသဘောကျတာနဲ့တင်လိုက်တာ။
အဲဒါကတော့ Total Video Converter 3.21 ပါ။
Last edited by nyinyi mt; 13-10-2009 at 10:24 AM..
Total Video Converter 3.21 ကိုတော့ဒေါင်း
သွားပြီဗျာ အရမ်းအဆင်ပြေတာပဲ အော်အပေါ်မှာ Password လိုနေတဲ့
ပို့စ်ကတော့ MP3 Splitter & Converter 2.8.6 ပါဗျာ ဒေါင်းပြီးတော့
စမ်းကြည့်ချင်တဲ့စိတ်တွေက ပေါ်လာတာနဲ့ ခေါင်းစဉ်လေးတပ်ပြီးပြောဖို့တောင် မေ့ကျန်
သွားတာ တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ ဆမိုင်းလေးရဲ့ပေါ့ဆမှု့အတွက်
ဒါကတော့ အတော်များများကို quality မြှင့်နိုင် ၊ နှိမ့်နိုင်တဲ့ Imtoo mpeg encoder ပါ . တစ်ကယ့်ကိုကောင်းပါတယ် . ကျွန်တော်ကတော့ သူ့ကိုအကြိုက်ဆုံးပါ . ကျွန်တော် သုံးသမျှ converter ထဲမှာတော့ ဒီကောင်လေးက အဆင်အပြေဆုံးပါ . အဓိက အားသာချက်က quality ကို မသိမသာ လျှော့ချလို့ ရတာပါပဲ . .mp3, .mp4, .3gp အစရှိတဲ့ format များကို ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ် .
Last edited by ညီနေမင်း; 02-10-2009 at 08:23 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ ညီနေမင်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စစ်တွေသားချေ, နိုင်သူရ, nyinyi mt
21-10-2009, 09:20 PM
ကိုဘြီးဇ်ခင်ဗျာ အပေါ်က converter လင့်ခ်လေး
အချိန်ရရင် တစ်ချက်လောက်ပြန်ကြည့်ပေးပါလားဗျာ လင့်ခ်ကအလုပ်
မလုပ်တော့လို့ပါ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ။
Originally Posted by ဆမိုင်းလေး
Setup file ချရန်
Crack file ချရန်
နောက်ဆုံးဘားရှင်းလိုချင်ရင်တော့ ဒီအောက်မှာ ဆက်ယူလိုက်ပါ။
Xilisoft Video Converter Ultimate 5.1.24.0531 (Latest)
pw > WWW.Myanmarfamily.Org
Last edited by ဖြိုးယံလေး; 21-10-2009 at 09:58 PM.. Reason: ပုံဖြည့်
စစ်တွေသားချေ, amaung344, bonge, tu tu
အောင်လွင်ဦး, ဖြိုးယံလေး, bonge, tu tu
Originally Posted by ye naung
video converter software တွေထဲမှာတော့ အကောင်းဆုံးလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။သူကသုံးရတာ အလွန်လွယ်ကူသလို ရိုးရိုး dvd player တွေမှာပါ ဖွင့်လို့ ရ တဲ့ dvd file type ကိုတောင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်။သုံးစွဲကြည့်ကြပါ။
အကိုရေ ... အိုင်ဖိုင်လင့်က အိပ်စ်ပဲယားတဲ့ဗျ။ ပြန်ပြီးဒေါင်းလို့ရအောင် ကူညီပါအုံးဗျာ။ ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်
Originally Posted by Aung Myo
I can't download rapidshare link. Can I get another link (mediafire or iFile). Thank you.
Originally Posted by လူဖုန်း
ဒီဆော့ဝဲလေးကိုလည်း မီဒီယာဖိုင်းယား ဒါမှမဟုတ် အိုင်ဖိုင်နဲ့ဖြစ်ဖြစ် ပြန်တင်ပေးပါလားဗျာ ။ ညီက ရက်ပစ်နဲ့ အဆင်မပြေလို့ပါ။ ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်
Last edited by tu tu; 12-11-2009 at 03:35 PM.. Reason: merge posts
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ phyothuhein အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စစ်တွေသားချေ, ညီညီဇော်, ရဲသွေးန်း, psaungsku, tu tu
စစ်တွေသားချေ, အောင်သုခ, psaungsku, tu tu
20-12-2009, 01:30 PM
ပြန်စာ - Total Video Converter 3.5
Last edited by phyothuhein; 20-12-2009 at 01:33 PM..
ဇာနည်မောင်, ဖယောင်း, chitnyimalay
convert all video files to 3gp,mp4,psp,ipod,iphone,flv,dvd,vcd,...
23-12-2009, 09:17 AM
အောက်ပါအသင်းဝင်9ဦးတို့မှ phyothuhein အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဆန်းမောင်, ပုထုဇဉ်, ကျော်ထက်ချိန်, မေယမင်း, chitnyimalay, james249, khit100, maJunior, phyomyintthein
ပို့စ် 156 ခုအတွက် 393 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကိုဆမိုင်းလေးရေ ကျွန်တော် FLV to Video Converter application ကိုဒေါင်းတာ link သေနေလို့ပြန်ကြည့်ပေး ပါအုံးဗျာ။ ကျေးဇူးကမ္ဘာပါ။
Find More Posts by နိုးတူး
24-12-2009, 05:21 AM
ပြန်စာ - FLV to Video Converter
Originally Posted by နိုးတူး
အကိုရေအနော်ကတက်လို့မဟုတ်ဘူးနော် အနော်သုံးနေတာက Format Factory လေ အောက်မှာဒေါင်းပြီးသုံးကြည့်ပါလား
အောက်ပါအသင်းဝင်7ဦးတို့မှ arkaraung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ချစ်သားငယ်လေး, စစ်တွေသားချေ, ညီညီဇော်, သက်နိုင်, mg aung kyaw, Myo Min Zaw, phyothuhein
ကိုနိုတူးခင်ဗျာ ခုလိုပြန်ပြောပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူး
တင်ပါတယ်ဗျာ ပြန်တင်ပေးတာနည်းနည်းနောက်ကျသွားလားမသိဘူး စောင့်နေရတာ
ကြာနေပီဆိုရင်လဲ တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ ဆမိုင်းလေးပြန်တင်ပေးပြီးပါပြီ မူလပို့စ်ကပဲ
ဒေါင်းလိုက်ပါတော့ အဆင်မပြေရင်လဲပြန်ပြောခဲ့လိုက်ပါဗျာ အဆင်ပြေပါစေနော် ။
ဖိုရမ်၏ ပင်မအချိန်သည် ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် +6.5 ဖြစ်သည်။ဒေသစံတော်ချိန် 07:15 PM